Rohingya Students Forum: ပထမဦးဆုံးမြန်မာကပြား ဗြိတိန်ပါလီမန်အမတ်
ပေါလ်စကူလေသည် ပထမဦးဆုံးမြန်မာကပြား ဗြိတိန်ပါလီမန်အမတ်ဖြစ်ပါသည်။ ပေါလ်၏ဖခင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ပေါလ်သည် ဘာလချောင်ကြော်နှင့် လက်သုတ်တို့ကိုစားသုံးပြီး ရန်ကုန်မြို့မှဘဝဇာတ်လမ်းများအကြောင်းကို နားထောင်ရင်း ကြီးပြင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ်မေလတွင် ကျင်းပခဲ့သော ဗြိတိန်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပေါလ်သည် ပါလီမန်အမတ်အဖြစ်ရွေးမြှောက်ခံခဲ့ရပါသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲသတင်းတွေကိုကျွန်တော်အမြဲနားထောင်ပါတယ်။ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေက တက်ကြွပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲက သမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြည်သူအများစုက ရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီးမျှတမှုရှိမရှိကို စိတ်ပူနေကြတာကို ကျွန်တော်သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အသံကိုကြားစေချင်တယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့သွားရောက်မဲပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်”
Paul Scully is Britain’s first MP of Burmese Heritage. His father was born in Burma and he grew up onadiet of balachaung (fried dried shrimp and chilli) and lattthoat (Burmese noodle and potato salad), listening to stories about life in Rangoon. Paul was elected to Parliament in the British election in May this year.
“I am following the Burmese elections closely. It has beenavibrant and interesting campaign. I hope the elections on 8th November will be an historic moment. I know many people have concerns about whether the elections will be free and fair, but if you want your voice heard, it’s important to go and vote.
Report by British Embassy Rangoon
Posted by Rohang king at 9:54 AM